Cunnooyin faa’iido u leh habdhiska difaaca aadamaha isla markaana jirka ka difaaca cudurada | Hawraar
August 11, 2014 Xiisaha/Xulashada, Xikmada Maanta No comments
Cunnooyin faa’iido u leh habdhiska difaaca aadamaha isla markaana jirka ka difaaca cudurada
Waxaan halkan idiinku so gudbinayna cunooyinka mihiimka u ah nolosha qofka si uu caafimaad taama u dareemo isla markaana siwayn uu uga faa,idayo habsami u socodka ilaalinta iyo xafidaada nolosha qofka.
Si hadaba fursad qiimaha badan ee hawraar.com idiinkuso gudbisay warbixintan qiimaha badan oo aan idinka soo diyaarinayay dhaqaatiir iyo ilaha ku shaqada leh waxaad ka eegi karta qoraalka warbixintaas oo si tafatiran aan idiinkuso gudbinayno .
Geedaha xawaashka lagu darsado oo macdanta Antioxidants la yidhaa ku badan tahay waxay qofka jidhkiisa siisa macdanaha ay ka midka yihiin Manganese
1. Sin-jibiilSin-jibishu waxay difaac u tahay bateeriyada jidhka bani’aadamka soo gasha, waxaanay ka kooban tahay laba daawo oo Antibiotic ah, sababtoo ah waxay jidhka ka caawisa inuu iska saaro waxyaabaha dibada kaga yimaada, waxaanay hoos-u-dhigta in qofka subagu ku bato.
Saliida laga shiido geedka la yidhaa kookenet (Coconut) oo ay ku jirtay Fatty Acid iyo Luaric Acid waxay qofka ka caawisa in jidhkiisu iska difaaco xannuunka gudaha ka hayo amma uu adkaysi u yeesho xannuunada jidhka gudahiisa ka haya qofka.
Cuntooyinka la Khamiiriyo
Cuntooyinka la khamiiriyo, gaar ahaan khudaarta qaar ka mid ah waxay qofka ka caawisa in hab-dhiskiisa dheef-shiidku si fiican u shaqeeyo, kadibna uu jidhku samaysto faytamiino daawo u noqda xannuunada
hab-dhiska dheefshiidka waxyeela, jidhka waxa uu ka saara Oxygen-ta (Detoxifying) si aanay sun ugu noqon oo macdanaha kale ee jidhka ula midoobin.
Geedaha Cuntada Lagu Darsado (Geedo-Xawaash)
Geedaha xawaashka lagu darsado oo macdanta Antioxidants la yidhaa ku badan tahay waxay qofka jidhkiisa siisa macdanaha ay ka midka yihiin Manganese, Calcium, fiber iyio Iron, qofka inta badan cunaana waxa kor u kaca hab-dhiskiisa difaaca cudurrada, sababtoo ah waxay ka difaacda walxaha cudurada sida sida Bacteria, Fungi iyo waxyaabo badan oo jidhka xannuuno ku keena.
Waxa kale oo lagu daaweeya geedaha xannuunada ku dhaca maqaarka, dheer-mareenka, wadnaha iyo cudurka macaankaba.
Toontu waxay jidhka ku yaraysa subagawga, waana il ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee laga helo macdanaha Manganese iyo faytamiinnada B6 iyo C.
Hilibka Xoolaha Nool
Hilibka xoolaha waxa inta badan ku badan nafaqada, waxaannu jidhku u baahan yahay waxyaabo uu quuto, waxaana hilibka xoolaha lagu yaqaana inuu badiyo shaqada maskaxda iyo in unugyada iyo nuduhu dib isu habeeyaan.